पोर्न दुनियाँ त्यागेर जागिर माग्न जाँदा..
कला / साहित्य यस्तो पनि
एजेन्सी काठमाडाैं, १३ फागुन
ठूला आँखा, लामो नाम, कसिलो र आकर्षक फिगर । उनले थाहै नपाइ पोर्न दुनियाँमा छिरेर तीन महिनामै सनसनी मच्चाइन् । सुरुवाती जीवनमा उनलाई कहिल्यै लागेको थिएन, ‘भविष्यमा विश्वमै चर्चित हुनेछु र त्यसको कारण हुनेछ आफ्नो पोर्न भिडियो ।’
२६ वर्षीया मिया खलिफा सन् २०१४ की नम्बर वान पोर्नस्टार थिइन् । अहिले उनको परिचय फेरिएको छ । उनी सामान्य जीवन जिउँछिन् र समाज सेवामा सक्रिय छिन् । यद्यपि, उनले आफ्नो अन्य परिचय ‘एक्स पोर्नस्टार’ बाट बाहिर निकाल्न सकेकी छैनन् ।
मियाले पोर्न उद्योगमा ३ महिना मात्रै काम गरिन् । २०१४ को अक्टोबरदेखि काम गरेकी उनी २०१५ को सुरुवातमै यो क्षेत्रबाट बाहिरिइन् ।
जुन समयमा उनी पोर्नबाट बाहिर आइन्, त्यतिबेला उनी इन्टरनेटमा हिट भइसकेकी थिइन् ।
केही महिनाअघि अमेरिकी लेखक मेगन अबोटलाई दिएको एउटा अन्तवार्तामा मिया खलिफाले आफ्नो पोर्न जीवनबारे केही बोलेकी थिइन् ।
उनीले भनेकी छन्, ‘मानिसहरुलाई पोर्न क्षेत्रमा करोडौं कमाउँछु जस्तो लाग्छ । तर, मैले यो कामबाट मात्रै १२ हजार डलर कमाएँ । यसपछि मैले यो कामबाट एक पैसा पनि कमाइनँ । पोर्न क्षेत्र छाडेपछि आम नोकरी खोज्न मलाई समस्या भयो । पोर्न मेरा लागि निकै डरलाग्दो थियो ।’
उनका अनुसार जागिर माग्न जाँदा कतिपयले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए भने कतिपयले सेक्सका लागि अफर गर्थे । ‘तिमी सेक्स भिडियो गरिसकेकी छौ, अप्ठेरो के छ र ? त्यसपछि सोचौंला भन्ने समेत भेट्टाएँ’, मियाले भनेकी छन् ।
मिया खलिफा अहिले पनि इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढी सर्च हुने एक्स पोर्नस्टार हुन् । तर यस्तो कामबाट उनी जति चर्चित भइन्, त्योअनुसार दाम भने कमाउन सकिनन् ।’
मिया लेबनानी मूलकी हुन् । छोटो पोर्न करियर उनको विवादित पनि बन्यो ।
हिजाब लगाएर शुट गरिएको भिडियोको मुस्लिम सम्प्रदायमा विवादको विषय बन्यो । त्यसैका कारण आईएसले उनको ज्यान लिने धम्की दियो ।
उनका इन्स्टाग्राममा मात्रै उनका १७ बढी फलोअर छन् । उनले सन् २०१४ मा पोर्न भिडियो बनाएकी थिइन् र यसलाई गोप्य राख्न चाहन्थिन् । तर, छोटो समयमा नै भिडियोहरू बाहिर आए । उनको भिडियो बनाउने बेबसाईट ससारकै नम्बर एक बन्यो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १३, २०७६, ०६:०२:००
बेलायतको लेबर पार्टीको नेतामा कीर स्टर्मर निर्वाचित
चितवनमा कारागारभित्र १५ श्ययाको क्वारेन्टाइन
डाक्टर बनेर काठमाडौंबाट झापा पुगेका २ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा
लकडाउनमा घरमा सामान बिग्रियो ? अब अनलाइनबाटै निःशुल्क मर्मत
श्रीलंकाको जेलबाट ३ हजार कैदीबन्दी रिहा
स्मार्ट डोकोमार्फत खाद्यसामग्री किन्नुस्, १० थान मास्क सित्तैमा लिनुस्
लकडाउनका बेला संचालित घुम्ती पसल बन्द